ချင်းတွင်းအထက်သို့ ဆန်တက်ခြင်း …. (၃) ကင်းရွာ - မောက်ကတော် - Calm Hill
ချင်းတွင်းအထက်သို့ ဆန်တက်ခြင်း …. (၃) ကင်းရွာ - မောက်ကတော်
မနက် ၉ နာရီမှာနှင်းကွဲပြီဆိုတော့ ကင်းကနေအထက်ကို ဆက်ပြီးဆန်တက်လာပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ယူလာတဲ့မော်တော်က အကြီးကြီးပါ အိပ်စရာအခန်းတောင် လှေဦးမှာပါသေးတယ်။ ကိုယ်ကလညး် ငယ်ငယ်ကတည်းက ရှမ်းပြည်မှာနေတာဆိုတော့ စက်လှေဆိုတာ အင်းလေးကစက်လှေလောက် မြင်ဖူးတာကိုး။ နေ့လည်စာကို မောက်ကတော်ဆိုတဲ့ရွာမှာ စားရမယ်လို့ ကင်းကနေပါလာတဲ့လူက ပြောပါတယ်။ မောက်ကတော်ကိုတော့ နေ့လည် ၁၂ လောက်ရောက်မယ်လို့ မှန်းရတယ်လို့ပြောတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့လမ်းမှာ ရေကလည်းအဆန်ဖြစ်နေတော့ ၁ နာရီထိုးတာတောင် မောက်ကတော်ကို မရောက်သေးဘူး။ လူတွေကလည်း အကုန်လုံးဆာနေကြပြီ။ ဒါနဲ့ မောက်ကတော်ရောက်အောင်ကလည်း နောက်ထပ် ၁ နာရီလောက်ကြာနိုင်သေးတယ် ခန့်မှန်းတော့ မောက်ကတော်အောက်နားလေးက သင်တောဆိုတဲ့ရွာမှာပဲ ဝင်စားကြစို့ အဲ့သည်မှာတော့ ထမင်းဆိုင်ရှိတယ်ဆိုပြီ သင်တောကိုမော်တော်ကပ်ပါတယ်။
ထမင်းဆိုင်ကလူတွေကလည်း ဧည့်အဝင်နည်းတဲ့ရွာဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ကိုမြင်တော့ ပျော်နေတာပေါ့။ ချပေးတဲ့တဲ့ဟင်းတွေကလည်း ငါးကြော် အကွင်းကြီးတွေက အကြီးကြီးတွေပဲဗျ။ ကြော်ပြီးသားကို နွေးပေးတာ အထူးဧည်သည်တွေ အတွက်လို့ပြောတယ်။ ဟင်းတွေကတော့စုံနေပြီ ထမင်းမရောက်သေးလို့ စောင့်နေတုံး စားပွဲပေါ်မှာ ဖြူဖြူအကောင်ကလေးတစ်ကောင် မြင်တယ်ဗျာ။ အဖေ့တပည့်တွေက ဆရာရေ လာဘ်တော့ကောင်းတယ်ဗျ တွေ့လား “လောက်” ကလေးတစ်ကောင်မြင်တယ်လို့ပြောပြီး စလိုက်နောက်လိုက်ပေါ့။ ကြည့်နေတုံးနောက်ထပ် တစ်ကောင်တွေ့ပါရောလား။ ဒါနဲ့မသင်္ကာလို့ သေသေချာချာကြည်လိုက်တော့ ငါးကြော်အကွင်းကြီးတွေထဲကနေ ထွက်လာတာကိုးဗျ။ နောက်တော့ ထွက်လာလိုက်ကြတာ စားပွဲပေါ်လည်း ရစရာကိုမရှိတော့ဘူး။ ဆိုင်ရှင်လင်မယားလည်း ဘယ်ကိုရောက်မှန်းမသိတော့ဘူး။ ထိုင်နေတဲ့လူတွေလည်း အဲ့ဒါတွေမြင်ပြီး အန်တဲ့လူကအန် ထမင်းဆာနေတာတောင် ဘယ်ရောက်သွားမှန်း မသိတော့အောင်ပါပဲ။
ဒါနဲ့ မောက်ကတော်ရောက်မှပဲ စားကြမယ်ဆိုပြီး မြန်မြန်ထွက်လာခဲ့ရပါတယ်။ ဒါတောင် အဖေ့တပည့်တွေက ပြောနေသေးတယ် တော်သေးတယ် မတော်တဆဖြစ်တာဆိုပေမယ့် သင်တောမှာဖြစ်လို့ပေါ့ မောက်ကတော်ဆိုရင်တော့ တောင်ထင်မြောင်ထင်ဖြစ်နေဦးမယ်တဲ့။ ဘာလဲမေးလိုက်တော့ မောက်ကတော်ဆိုတဲ့ရွာက သူတို့အခေါ်ပြောရရင် စုံးတို့ ကဝေတို့ အတတ်တွေနဲ့ တော်တော်ကို နာမည်ကြီးဆိုပဲ။ သူတို့ပြောတာတော့ ဒါကြောင့် လူတော်တော်များများ မောက်ကတော်ရောက်ရင် အိမ်ထောင်ကျတာများတယ်တဲ့။ မောက်ကတော်ကို နေ့လည် ၂ နာရီလောက်မှပဲရောက်ပါတော့တယ်။ နေ့လည်စာနဲ့ညစာကို မောက်ကတော်မှာပဲ ပေါင်းစားလိုက်ရတယ်လေ ဒါပေမယ့် စောစောကအကောင်တွေ မြင်နေမိတာနဲ့ ဘယ်သူမှလည်း ဟက်ဟက်ပက်ပက် မစားနိုင်ကြတော့ပါဘူး။ မောက်ကတော်ကို စိတ်ဝင်စားလို့ နည်းနည်း လေ့လာကြည့်လိုက်တော့ မောက်ကတော်က အဲ့သည့်တစ်ဝိုက်က ရွာတွေနဲ့စာရင် အင်မတန်မှ လူအရောက်အပေါက်လည်းများပါတယ် နောက်ပြီးတော ကုန်ကူးတဲ့စခန်းလိုဖြစ်နေတော့ မောက်ကတော်သူတွေ ဝတ်တာစားတာက ရွာဆိုပေမယ့် အညာရွာတွေလိုမဟုတ်ပဲ မြို့သူတွေလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီတော့မှသဘောပေါက်တယ် ဒီနားရောက်တဲ့ အရာရှိပေါင်းစုံက ဖွန်ကြောင်စရာမရှိတော့ မောက်ကတော်လာလာ ဖွန်ကြောင်ရင်းနဲ့ မောက်ကတော်ရွာသူတွေနဲ့ အိမ်ထောင်ကျတာများတာပါ။ ဒါကြောင့် ချင်းတွင်းတစ်ကြောမှာတော့ မောက်ကတော်သူဆိုတာ အင်မတန်နာမည်ကြီးပါတယ်။